Yemutemo ziviso uye mamiriro ekushandisa 🥇 Emulator.online ▷ 🥇
Zvemutemo ziviso uye mamiriro ekushandisa
Gwaro rakaongororwa pa15 / 05 / 2020
Zita rekambani ndi: Jorge Bardales
• Hofisi yakanyoreswa iri paC / Tórtola n-7 18014 (Granada)
Ipa zvemukati zvine chekuita neInternet Kushambadzira chiitiko.
Paunenge uchishandisa iyo emulator.online webhusaiti, Mushandisi anobvuma kusaita chero hunhu hunogona kukuvadza mufananidzo, zvido uye kodzero dzeemulator.online kana wechitatu mapato kana izvo zvinogona kukuvadza, kuremadza kana kuwandisa iwo emulator webhusaiti. online kana izvo zvaizodzivirira, neimwe nzira, zvakajairika kushandiswa kwewebhu.
emulator.online inotora zvine mutsindo zvakakwana matanho ekuchengetedza kuti aone kuvepo kwehutachiona. Nekudaro, Mushandisi anofanira kuziva kuti matanho ekuchengetedza emakomputa paInternet haasi akavimbika zvachose uye, nekudaro, emulator.online haigone kuvimbisa kusavapo kwemavirusi kana zvimwe zvinhu zvinogona kukonzera shanduko mumasystem emakomputa. (software ne Hardware) yeMushandisi kana mumagwaro avo emagetsi uye mafaera arimo.
Chengeta, shambadza uye / kana kuendesa data, zvinyorwa, mifananidzo, mafaera, zvinongedzo, software kana zvimwe zvinhu zvinorambidzwa zvinoenderana nezvinodiwa zviri pamutemo, kana kuti maererano nekufungidzira kweemulator. , zvinonyadzisa, rusaruraganda, xenophobic kana zvimwe zvinopesana kana zvisiri pamutemo kana izvo zvinogona kukuvadza chero mhando, kunyanya zvinonyadzisira.
Sewe mushandisi, iwe unoudzwa kuti kupinda kune ino webhusaiti hazvireve, munzira ipi neipi, kutanga kwehukama hwekutengesa naJorge Bardales nenzira iyi, mushandisi anobvuma kushandisa webhusaiti, masevhisi ayo nezviri mukati pasina kutyora mutemo. ikozvino, kutendeka kwakanaka uye kurongeka kwevanhu. Iko kushandiswa kwewebhusaiti nekuda zvisiri pamutemo kana zvinokuvadza zvinangwa, kana izvo, neimwe nzira, zvinogona kukuvadza kana kudzivirira kujairika kushanda kwewebhusaiti kunorambidzwa.
Kubereka kwayo, kugovera kana kuchinjisa, izere kana chimwe chikamu, kunze kwekunge yatenderwa nevaridzi vayo zviri pamutemo;
Jorge Bardales anovimbisa kuvanzika kwe data rako rakapihwa neVASHANDI uye kurapwa kwavo zvinoenderana nemutemo uripo parizvino kuchengetedzwa kwe data rako, uchitora zviri pamutemo kuchengetedzwa mazinga ekudzivirirwa kwemunhu data.
Jorge Bardales anozvipira kushandisa iyo data inosanganisirwa mufaira "Vashandisi veWEBHSITI NEVANOBATSIRA", kuremekedza zvakavanzika zvavo uye kuzvishandisa zvinoenderana nechinangwa chazvo, uye kutevedzera chisungo chake chekuvaponesa uye kugadzirisa matanho ese kunzvenga shanduko, kurasikirwa, kurapwa kana kusabvumidzwa kuwana, zvinoenderana nezvakapihwa neRoyal Decree 1720/2007 yaZvita 21, iyo inobvumidza Mitemo yekusimudzirwa kweOrganic Law 15/1999 yaZvita 13, Kudzivirirwa kweDunhu Dunhu.
Mushandisi anogona kurovedza muviri, zvine chekuita nedatha yakaunganidzwa, kodzero dzinozivikanwa muOrganic Mutemo 15/1999, yekuwana, kugadzirisa kana kudzima kwedata uye kupikisa. Kuti ushandise kodzero idzi, mushandisi anofanira kunyora uye kusaina chikumbiro chavanogona kutumira, pamwechete nekopikopi yeID yavo kana gwaro rekuzivisa rakaenzana, kukero yepositi yaJorge Bardales (ndokuti, C / Tórtola n-7 18014 (Granada)) kana neemail, yakanamatira kopi yeID ku: info (pa) emulador.online. Pamberi pemazuva gumi, chikumbiro chichapindurwa kuratidza kusimbiswa kwekodzero yawakakumbira kushandisa.
Jorge Bardales anozivisa kuti kune mafomu ekunyunyuta anowanikwa kune vashandisi nevatengi.
Mushandisi anogona kutora zvikumbiro nekukumbira fomu yavo yekukumbira kana nekutumira email kuinfo (pa) emulador.online inoratidza zita rako nesurname, sevhisi kana chigadzirwa chakatengwa nekutaura zvikonzero zvekuda kwako.
Iwe unogona zvakare kunongedza chikumbiro chako neposvo tsamba kuna: Jorge Bardales, C / Tórtola n-7 18014 (Granada) uchishandisa, kana uchida, fomu inotevera yekudaidzira:
Nezve kutariswa kwe: Jorge Bardales
Kubudikidza neaya Mamiriro Ezvinhu, hapana huchenjeri kana kodzero yezvivakwa zveindasitiri zvinopihwa pamusoro peiyo webhu emulator.online ane yake njere pfuma ndeyaJorge Bardales, iyo kubereka, shanduko, kugovera, kutaurirana neruzhinji, kuita kuti iwanikwe kuruzhinji, kuburitsa kuri kurambidzwa zvakajeka kune Mushandisi. , kushandisazve, kuendesa mberi kana kushandiswa kwechero hunhu, nenzira dzese kana maitiro, ehumwe hwazvo, kunze kwekunge pazvinotenderwa zviri pamutemo kana kupihwa mvumo nemubati wekodzero dzinoenderana.
Muchiitiko chekuti mushandisi kana wechitatu anofunga kuti kwave nekutyorwa kwekodzero dzavo dzepamutemo dzehungwaru nekuda kwekuunzwa kwezvimwe zvirimo paWebhu, vanofanirwa kuzivisa Jorge Bardales nezvemamiriro ezvinhu akati:
Jorge Bardales anoramba chero mutoro maererano neruzivo rwunowanikwa kunze kwewebhusaiti, nekuti basa rezvinongedzo zvinoonekwa ndezvekuzivisa Mushandisi nezve kuvapo kwemamwe masosi eruzivo pane imwe nhaurwa. Jorge Bardales anoregererwa kubva kune wese mutoro wekushanda chaiko kwemahukama akadaro, mhedzisiro inowanikwa kuburikidza nezvakataurwa zvinongedzo, huchokwadi uye hunhu hwezvakanyorwa kana ruzivo runogona kuwanikwa, pamwe nekukuvara uko Mushandisi angatambura nekuda kweruzivo rwakawanikwa pawebhusaiti yakabatana.
Jorge Bardales haape chero vimbiso kana kuti haana basa, chero zvazviri, zvekukuvara kwechero hunhu hunogona kukonzerwa na:
Kazhinji, hukama pakati peemulador.online neVashandisi veayo terevhizheni masevhisi, aripo pane ino webhusaiti, ari pasi pemitemo yeSpain nemasimba uye kuMatare eGranada.
Muchiitiko chekuti chero Mushandisi aine chero mibvunzo nezve ichi chiziviso chepamutemo kana chero chirevo pane emulator.online webhusaiti, vanogona kuenda kuinfo (pa) emulador.online.
emulator.online inochengetera kodzero yekushandura, chero nguva uye pasina ziviso isati yaitika, kuratidzwa nekugadziriswa kweiyo emulator.online webhusaiti, senge ichi chiziviso chepamutemo.
Mushandisi anobvuma kusaita chero hunhu hunogona kukuvadza mufananidzo, zvido uye kodzero dzema emulator. Online kana wechitatu mapato kana izvo zvinogona kukuvadza, kuremadza kana kuwedzeredza webhu emulator. Online kana izvo zvaizodzivirira, munzira ipi neipi, iko kujairika kushandiswa kwewebhu.